Ogaden News Agency (ONA) – Faraca Midnimo ee xerada Dhagaxley oo shirkoodii caadiga ah uu si habsami ah ugu qabsoomay
Faraca Midnimo ee xerada Dhagaxley oo shirkoodii caadiga ah uu si habsami ah ugu qabsoomay
Posted by ONA Admin	/ June 1, 2014
Maanta oo Sabti ah taariikhduna ay ku beegnayd 31/5/14 Waxaa xerada qoxootiga Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab lagu qabtay shirkii caadiga ahaa ee faraca MIDNIMO ee kahowl gala xerada Dhagaxlay. Shirkan oo ahaa mid si heersara ah loosoo agaasimay ayaa waxaa kasoo qayb galay inta badan xubnaha faraca Midnimo iyo laamihiisa kala duwan sida ururhoosaad yada kala ah OYSU Ururka Culimada Ururka Haweenka iyo laanta Qoxootiga Ogadenia umatasha gudiyada qoxootiga oo magacooda loosoo gaabito ORCC. Iyo waliba martisharaf kale.
Kulankan oo ahaa mid balaadhan ayaa furmay abaare 2:00 duhurnimo waxaana lagu furay wacdi diini ah oo uusoo jeediyay hogaanka dabagalka iyo arimaha diinta ee faraca wuxuuna hogaanka ugu horaynba umahad celiyay Allaha suurta galiyay kulankan qiimaha badan wuxuuna sidoo kale umahad celiyay kasoo qayb galayaashii shirka. Wuxuu sheekhu dadkii xasuusiyay cabsida Allaah oo qofkasta oo muslim ah waajib ku ah, isagoo ku dheeraaday jihaadka iyo liibaanta uu leeyahay, wuxuuna xusay in uu waajib kuyahay dhalinta u nasab sheegata wadanka Ogadenia.
Intaas kadib waxaa lasii amba qaaday qodobodii shirka loogu talagalay oo muhiimad gaar ah wada lahaa iyadoo madasha laga akhriyay warbixin dheer oo lagaga warbixinayay gudaha Ogadenia iyo dibadiisaba waxayna dadwaynihii ka haqab beeleen wararkii ay u oomanaayeen sida dhacdooyinkii ugu danbeeyay ee dhexmaray CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya iyo marxaladaha kala duwan ee uu marayo halganka hubaysan ee ay JWXO caynaanka uhayso iyo guud ahaan caalamka wixii Ogadenia kakhuseeya.
Dhanka kale waxaa madasha aad loogu lafa guray sidii loosii hormarin lahaa taas oo ay maamulka iyo xubnuhu afkaarahooda ku muujiyeen sifooyinka laysaga dulqaadi lahaa cadawga haysta ciida Ogadenia. Waxaana hoosta laga xariiqay horumarka dhinac kasta ah ee ay sameeyeen shacabka S.Ogadenia iyo jabhada ONLF.
Sidoo kale waxaa madasha lakusoo dhaweeyay abwaanka faraca Cabdulaahi Aadan oo madasha kasoo jeediyay gabay aad uqiimo badan oo dadkii shirka fadhiyay qalbiyadooda dhalaaliyay.
Intaas kadib waxaa lagaadhay xiligii afkaarta xubnaha waxaana si aad moodo in ay kala boobayaan farta uwada taagayay xubnihii faraca Midnimo oo afkaartooda saliimka ah goobta lagaga dhagaysta iyagoo mid mid loo siinayay.
Guntii iyo gunaanadkii waxaa lasoo gabagabeeyay shirkii xili ay goorsheegtu maraysay 4:30 daqiiqo wuxuuna kusoo dhamaaday jawi dagan oo farxad leh.